Onlinesamaya.com | Nepal News Portal, Business, Hot News, Interview, Opinions, Politics, Science, Technology, Social, Media, Sports, Youth, Model Watch, Movies
+977 1 4410478
कथा र उपन्यास
नेपाल–लग्जेम्बर्गबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता
१५ माघ २०७६, बुधबार १६:२६
काठमाडौं । नेपाल र लग्जेम्बर्गबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता भएको छ । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका लग्जेम्बर्गका विदेशमन्त्री जिन एसलवर्न र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलबीच परराष्ट्र मन्त्रालयमा जारी द्विपक्षीय वार्तामा आपसी हित र चासोका विविध विषयका साथै साझा चासोका क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषयमा पनि विचारविमर्श भइरहेको बताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विदेशमन्त्री एसलवर्नको सम्मानमा […]
भारतको उडिसामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, ७ जनाको मृत्यु, ४० जना घाइते
१५ माघ २०७६, बुधबार १५:३९
एजेन्सी । भारतको पूर्वी राज्य उडिसामा एउटा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा बसमा यात्रारत कम्तीमा सात जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४० जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार उडिसाको गनजम जिल्लाको तप्तपानी इलाकाको पहाडी क्षेत्रमा गुडिरहेको बस एकाएक खोल्सामा झरेको थियो । बुधबार राति करिब ३:३० बजे उक्त दुर्घटना भएको थियो । घाइतेहरुलाई स्थानीय अस्पतालहरुमा भर्ना […]
कोरोनाभाइरसका कारण १०६ जनाको मृत्यु, चीनबाहेक १६ देशमा ४७ जना सङ्क्रमित
१४ माघ २०७६, मंगलवार १६:४७
काठमाडौं । चिनियाँ अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसका कारण १०६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सङ्क्रमित व्यक्तिको सङख्या दुईगुनाले बढेको छ । सोमवारसम्म २,८३५ व्यक्ति उक्त भाइरसबाट पीडित भएको तथ्याङ्क थियो । तर मङ्गलवार कम्तीमा ४,५१५ जनामा कोरोनोभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ । उक्त भाइरस रोकथाम गर्ने प्रयासमा केही सहरमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध […]
सोलोमोन द्वीपमा शक्तिशाली भूकम्प
१३ माघ २०७६, सोमबार १७:१३
एजेन्सी । सोलोमोन द्वीपमा सोमबार ६.३ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प आएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था (युएसजिएस) ले जानकारी दिएको छ । यस भूकम्पपछि सुनामी चेतावनीको कुनै सुचना भने जारी गरिएको छैन । स्थानीय समयाअनुसार सोमबार अपराह्न ४ बजे सो भूकम्प आएको थियो । राजधानी होनीआराबाट करिब १४० किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा समूद्रको सतहबाट १७.७ किलोमिटर गहिराईमा उक्त भूकम्पको […]
इरानमा विमान रनवेबाट चिप्लेर राजमार्गसम्म पुग्यो, यात्रु सबै सुरक्षित
१३ माघ २०७६, सोमबार १६:४५
एजेन्सी । दक्षिणपश्चिम इरानमा क्यास्पियन एयरलाइन्सको विमान सोमबार विमानस्थलको रनवेबाट चिप्लेर नजिकैको राजमार्गसम्म पुगेको छ । दुर्घटनामा विमानमा रहेका सबै यात्रु सुरक्षित रहेको इरानको राष्ट्रिय मिडियाले जनाएको छ । ‘महसहर विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्ने क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिएको हो । दुर्घटनामा सबै यात्रु सुरक्षित रहेका छन्,’ आइआरएनएले जनाएको छ । केही इरानी मिडियाका अनुसार विमानमा १३५ […]
कोरोना भाइरसका कारण चीनले पर्यटकीय गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय ‘टुर’ स्थगित गर्ने
१२ माघ २०७६, आईतवार १३:३९
चीन । कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएपछि चीनले सोमबारदेखि सबै प्रकारको पर्यटकीय गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय ‘टुर’ भ्रमण स्थगित गर्ने भएको छ । आन्तरिक पर्यटकीय गतिविधि भने गएको शुक्रबारदेखि नै स्थगित गरिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र हुँदै गएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ नयाँ वर्ष ‘लुनार’ को अवसरमा चीनले गम्भीर अवस्थाको सामना गरिरहेको बताएका […]
अमेरिकामा बेरोजगारको संख्यामा वृद्धि
१० माघ २०७६, शुक्रबार १४:११
वासिङटन । संयुक्तराज्य अमेरिकामा गतसाता बेरोजगारको संख्यामा सामान्य वृद्धि भएको अमेरिकी श्रम विभागले जनाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक विवरणमा बेरोजगार भत्ता लिन आवेदन गर्नेहरु अघिल्लो साताको तुलनामा ६ हजारले बढी भएको उल्लेख छ । जनवरी १८ को अन्त्यमा बेरोजगार भत्ताका लागि आवेदन गर्नेको संख्या दुई लाख ११ हजार पुगेको छ । यहीबीच अमेरिकी श्रम बजारमा […]
ओली र मोदीले एकसाथ एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको ‘स्वीच अन’ उद्घाटन गर्ने
६ माघ २०७६, सोमबार १४:०९
मोरङ । बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले सो चौकी निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेपछि सञ्चालनमा आउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा मङ्गलबार एकै समयमा ‘स्वीच अन’ गरी चौकीको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको उद्योग,वाणिज्य तथा […]
अमेरिकामा आएको भीषण आँधीमा परेर ११ जनाको मृत्यु
२७ पुष २०७६, आईतवार १७:२९
एजेन्सी । दक्षिणी अमेरिकामा आएको भीषण आँधीका कारण कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गएको छ । आँधीले तेज हावा र ठूलो वर्षा निम्त्याएको छ । अलाबामा, लुइजियाना र टेक्सस राज्यमा मृत्युका घटना भएको विवरण आएका छन् । आँधीका कारण विद्युत्‌ आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा दशौँ हजार मानिस प्रभावित भएका छन् । केही घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने […]
अस्ट्रेलियामा लागेको आगो झनझन फैलिदै, प्रधानमन्त्री मोरिसनले मागे माफी
२७ पुष २०७६, आईतवार १७:१५
एजेन्सी । दक्षिण–पूर्वी अस्ट्रेलियाको आकाशको रङ्ग पूर्णरुपमा रातो देखिएको छ । आगलागीका कारण अस्ट्रेलियामा नयाँ वर्षको सुरुवात चिन्ताबाट सुरु भएको छ । यद्यपि यहाँको झाडीनुमा जङ्गलमा गएको वर्षको सेप्टेम्बरमा आगो लागेको थियो तर अहिलेसम्म पनि आगोले रोकिने सङ्केत देखाएको छैन । आगलागीबाट अहिलेसम्म २८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जति ठूलो डेनमार्कको भाग छ, त्योभन्दा […]
Saujanya Media Pvt. Ltd.
Phone: +977-1-4410478 / 4410886
Copyright 2019 @ Onlinesamaya.com All Rights Reserved.
Designed & Developed by MG Infotech